Umdyarho weeMoto eziMini, ukubaleka kakhulu kwi-Intanethi | I-Androidsis
Un umdlalo omtsha wokubaleka iza kwi-Android ukubonelela ngeyona nto inomdla kwisantya senkqubo yokusebenza kukaGoogle. Isihloko esitsha sibizwa ngokuba yiMini Motor Racing kwaye siyasivumela ukuba silawule iimoto ezincinci kwezona ntsiba zimnandi kakhulu kuzo zonke iintlobo zoseto: amanxiwa, amahlathi, iintaba, iintaba-mlilo nokunye okuninzi.
IMedia Racing ineemoto ezili-18 zokuqhuba, kwaye une imenyu yokwenza ngokwezifiso ngokupheleleyo ukukhetha zonke iintlobo zemibala kunye nezixhobo. Ukhuphiswano lweMini Motor racing lwenzeka kwiisekethi ezingama-20 ezahlukeneyo ezibandakanya imijikelezo yemini nobusuku.
Umoya weMini Motor Racing uhlangula umdyarho weemoto ezindala olawulo olukude, kunye nethuba lokuwela iimeko ezingenakwenzeka ngesantya esiphezulu kwaye wonwabele umsebenzi obalaseleyo wobugcisa ophunyezwe ngabaphuhlisi Isigayo seBhinary.
Inguqulelo yangoku yi-1.0 kwaye isebenza kwiifowuni eziphathwayo ezine-Android 2.3.7 okanye ngaphezulu. Umdlalo ubiza i-1,55 euro kwaye inikezela ngamathuba awodwa kwabo bafuna ukonwabela zonke iimoto kunye neesekethe ngaxeshanye: hlawula ukuvula.
Kulabo abakhetha imiceli mngeni, ukuvula iimoto kunye nemeko ezixhomekeke ekuhlangabezeni iinjongo ezahlukeneyo kwiimowudi ezi-3 zomdlalo. UMdyarho weeMoto ezincinci uquka Imo yomsebenzi ngeentshatsheli ezimbini ezahlukeneyo, ubuNtshatsheli boqobo bemidyarho eli-120 kunye neNtshatsheli yeBhonasi engama-92. Uloyiso ngalunye lusivumela ukuba sizuze imali yokwenza utshintsho kwisithuthi sethu.
Enye yeendlela ezihlekisayo yile racing intanethi, ukwazi ukudlala nabahlobo abayi-4 okanye abantu abavela kwihlabathi liphela. Ukuthatha ithuba lonxibelelwano lweWi Fi kuninzi lwee-smartphones zamaxesha akutshanje, iMini Motor Racing yeyona ndlela ilungileyo yokubaleka imidyarho naphina ngaphandle kwengxaki ezivela kwintuthuzelo yomnxeba.
Njengobhonasi, umdlalo ubandakanya izinto ezahlukeneyo kunye nods ukuya komnye umdlalo othandwa kakhulu kwi-Android: Isiqhamo seNinja. Ukuba siphakathi kwabalandeli besiphithiphithi sesiqhamo kunye nentshabalalo, siyakufumana ii-winks ezahlukeneyo kunye neemoto eziphefumlelwe zizinto ezithile zomdlalo wokusika ngobuchule iziqhamo usebenzisa isikrini sokuchukumisa.
Ukuba uthanda isantya kunye nesihloko sokhuphiswano, ke umdlalo omtsha we-android IMoto yeMidyarho yeMoto ayinakuphuthelwa kwingqokelela yakho, kwaye ngaphezulu kwexabiso elinokufikeleleka sinokuyonwabela imizobo esemagqabini kunye nolona khuphiswano lonwabisayo kwi-Intanethi kwi-Android.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Aphi Amanzi Am? umdlalo iphazili ngetywina Disney
Khuphela - IMedia Racing
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » UMdyarho weeMoto ezincinci, ugqatso lomdlalo wabadlali abaninzi kwi-Android